FAALLOOYIN Archive | TOP NEWS
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 18, 2018 FAALLOOYIN, WARARKA
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa weli ku guda jira safar uu ku marayo qeybo ka mid ah dalka, wuxuuna la kulmayaa soo dhoweyn ballaaran. Waxaa la filayaa in uu maanta goobjoog ka noqdo dhaqangalka heshiiskii ay wada saxiixdeen maamulka Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljamaaca. Hadaba madaxweyne Farmaajo waxaa amnigiisa sugaya ciidammo Soomaali […]
Wasiirkii arimaha dibada Somalia oo qormo xasuus ah ka qoray (Kaddare: Waan Ceeboobay!)
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 13, 2018 FAALLOOYIN, WARARKA
Xuseen Shiikh Axmed Kaddare oo ahaa dhaqan yaqaan ayaa beri Radio Muqdisho ka sii deyn jiray Barnaamij toddobaadle ah oo ku saabsan Dhaqanka. Kaddare AUN wuxuu ahaa hadalyaqaan, caqli u saaxiib ah. Wuxuu ahaa nin dadaal badan oo hey’ado kala duwan si uun ugu lug leh. Wuxuu ahaa Agaasime Waaxda Dhaqanka ee Wasaaradda Hiddaha iyo […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on January 9, 2018 FAALLOOYIN, WARARKA
Soomaaliya waxey dhexda uga jirtaa dhaqan xil ka qaadis iyo magaacabis joogto ah, Dowladihii hore iyo tan hadda joogtaba waxaa jira dad howl wanaagsan hayay oo shaqadda laga eryay bilaa sabab, in jagadda laga qaado qofka oo mid kale lasoo magacaabo ma’ahan dambi oo waa dhaqan maamul, laakiin waxaa ceeb ah inaan aragno mar walba […]
Erdogan: magaalada Qudus waa ”In ay noqoto caasimadda rasmiga ah ee Falastiin”
By Tifaftiraha Somalida Maanta on December 13, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA, WARARKA DIBADDA
Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa hoggaamiyayaasha dalalka Muslimiinta ku baraarujiyay in Qudus ay u aqoonsadaan in ay tahay “caasimadda xoogga lagu haysto ee Falastiin” Hadal kuu ka jeediyay kullanka Ururka Iskaashiga Islaamka ayuu ku sheegay in go’aanka Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa’iil in uu yahay “waxba kama jiraan”. Erdogan ayaa markale […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on December 12, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA
Qaradamada Midoobey ayaa sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 2,078 oo qof, laguna dhaawacay 2,507 oo kale, muddo laba sanno gudahood ah. Waxay taasi muujineysaa in dadka rayidka ah ee ay dhibaatada ka soo gaarto amni darrada Soomaaliya ay sare u sii keceyso, sida lagu xusay warbixinta. Haddaba, sidee loo dilay dadkaasi yaase dilay? Warbixintan ayaan […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on December 6, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA
Soomaalida waxay Tiraahdaa “Ruux aad Barashadiisa Rabtid Jabad la Xaaro, Jadiin la Cun ama Jid la mar” sida darteed murtidaan waxay Tilmaameysa sida baniaadamka lagu ogaan karo Dabeecadihiisa Xumaan iyo Samaan markaad la Daristo, Safar wada gashaan, ama Cunto Wadaagtaan sida darteed Maalin uun la wadaag in aad Wada shaqeysaan Fahad Yaasiin markaas baa wax […]
Yuusuf Garaad oo kulan la qaatay Madaxweynaha Jasiirada Seychelles
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 28, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA
Madaxweynaha Seychelles, Danny Faure, ayaa Isniin xafiiskiisa ku qaabbilay aniga iyo wafdigeyga. Madaxweynaha waxaan ka wadahadalnay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Seychelles. Madaxweynuhu wuxuu xusay in uu ku faraxsan yahay in wafdi Soomaaliya ka socda oo heerkan ahi uu dalkiisa soo booqdo. Wuxuu ii sheegay in ay weerarrada burcad badeedku dhib weyn u geysteen […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 23, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA
Doorashadii ka dhacday Somaliland 13kii bishan Nofembar, ayaa kusoo dhammaatay si nabad gelyo ah, waxaana madaxweyne loo doortay Muuse Biixi oo ahaa musharraxa xisbiga Kulmiye ee hadda talada haya. Mid ka mid ah waxyaabihii uu ololaha doorashada ku galay ayaa ah in wadahallada Somaliland iyo Soomaaliya dib loo bilaabo, si cusubna loo wajoho. Wax wada […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 16, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA, WARARKA DIBADDA
Militariga dalka Zimbabwe ayaa xabsi guri geliyay madaxweyne Robert Mugabe, waxayna la wareegeen telefishinka qaranka iyo awoodda dalka. Ciidamada iyo gawaaridooda ayaa ku sugan jidadka Harare halkaas oo rasaas iyo qaraxyo laga maqlay Arbacadii. Ma inqilaab baa? Militariga waxay ku adkeysanayaan in uusan afgembi ahayn, balse waxaa jiro calaamado badan oo muujinaya. Calaamadaha lagu garto […]
Warbixin: Qaraxii Isgoyska Zoobe oo laga joogo muddo bil ah
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 14, 2017 FAALLOOYIN, WARARKA
Muddo bil ah ayaa laga joogaa Qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Isgoyska Soobe 14-kii Bishii hore. Bil kadib Isgoyska Soobe isbedel ayaa laga dareemayaa oo dhan walbo ah goobihii ganacsiga dadka qaar waa ay dhisteen halka kuwa kalena aysan weli dhisan, sidoo kalena wadada waxa ay noqotay mid caadi ah oo […]